ढकमक्क फूले गुराँस, कोरोना सर्ने डरले चुम्न जादैनन्
शनिवार, चैत्र २९, २०७६ सिपी पौडेल
मानिस जब १६/१७ वर्षको उमेरमा लाग्छ । कसैले मलाई राम्रो देखुन, राम्रो मानुन । हो, यस्तै लाग्छ आजभोली फूलेका राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसलाई । तर बिडम्बना हेरिदिने कोही मानिस छैनन । रातो रंगको लाली जस्तै सिगारिने भएर होला सायद यसको नाम लालीगुराँस राखिएको । ओठमा लिपिस्टिक लगाएका जस्ता देखिन्छन् लालीगुराँसका बोटहरू । उनीहरूको ओठमा चुम्नलाई कोही भेटिदैन । नत, सुम्सुम्याउने र हात मिलाउनेहरू नै । हुन पनि कसरी ? जाउन, चुम्बन गर्दा कोरोना सर्ने डर छ र हात मिलाउँदा पनि ।
ओठमा लिपिस्टिक लगाएका जस्ता देखिन्छन् लालीगुराँसका बोटहरू । उनीहरूको ओठमा चुम्नलाई कोही भेटिदैन । नत, सुम्सुम्याउने र हात मिलाउनेहरू नै । हुन पनि कसरी ? जाउन, चुम्बन गर्दा कोरोना सर्ने डर छ र हात मिलाउँदा पनि ।
अहिले प्यूठानका पहाडी भेगका वनजंगलमा ढकमक्क लालीगुराँस फूलेका छन् । राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसले प्यूठानलाई नै मनमोहक बनाएको छ । शरद ऋतुको अन्तिमपछि फूलेर बसन्त ऋतुसम्म वन जंगलको सौन्दर्य छरिरहेका लालीगुराँसलाइए अहिले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका बीच हिजोआज अबलोकन गर्ने कोही छैनन् ।
लकडाउनका कारण हिँडडुल बन्द छ । उनीहरूलाई हेरिदिने र अर्को वर्ष अझै वैसालु बन्न अभिप्रेरित गर्ने प्यूठानीहरु कोही जादैनन् । जाउन पनि कसरी नेपालमा अहिले लकडाउन छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान दिदैन प्रहरीहरुले । आफूहरु त डिउटीमा बहाना बनाई बनाई आउँछन । गाउँमा ठुला भनाउँदाहरु के छ भनेर गाउँ आएका वेला लुकीलुकी सुटुक्क आउछ । पत्रकारहरु समाचार बनाउने बाहानामा आउँछन लुकेर चुमेर जान्छन् तर अरुलाई आउन दिदैनन । यस्तै लाग्छ उनी हरुलाई ।
पाखाभरी नै ढकमक्क फूलेका गुराँसले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउने गर्दछ । तर उनीहरू हेरिदिने कोही पनि छैन । उनीहरूलाई लाग्दो हो यसपाली प्यूठानीले मायाँ मारेछन । यस बर्षको मेरो लाली जोवान ओइलाएर जाने भयो । लाग्छ, गुराँसका थुँगाहरु कोही आउने प्रतीक्षामा बसिरहेछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, चैत्र २९, २०७६, ०४:३६:४१